Incazelo yokugqoka obomvu ephusheni lamadoda nabesifazane. Ukubona izingubo ezinjalo wena noma unkosikazi ongajwayelekile.
Incazelo yokulala lapho ugqoke khona ngengubo ebomvu.
Kwabaningi, izingubo ezibomvu noma ingubo yombala ofanayo kuwuphawu lokukhathazeka nobudlova. Kodwa uhlola kanjani ukuthi ngabe ucezu olunjalo lwezingubo luze kuwe ngesikhathi sokuphumula ebusuku? Incwadi yethu yokuphupha izokusiza ukuba uqonde ukuthi ungayichaza kanjani imibono enjalo nokuthi yiziphi izenzakalo ongayilindela ekuphileni okuzayo.
Kuncike kakhulu ukuthi ngubani obona ingubo ebomvu ephusheni nokuthi kanjani. Sinikeza incazelo ephelele ngokusekelwe ngokuqondile kulezi zici.
Indwangu ebomvu intombazane
Indoda eye yabona iphupho elinjalo kufanele ilungiselele izenzakalo ezimbi ekuphileni. Cishe, esikhathini esizayo esiseduze kulindeleke ukuthi ziphelelwe ithemba futhi izinkinga zezempilo zilula.
Ukubona umuntu ongaziwa ngengubo ebomvu kusho ukuthi umphuphi ngesikhathi esithile sokuphila usondelene kakhulu nemizwa nemizwelo ekwenzeni izinqumo, kunokubheka okunengqondo. Kodwa ungaphelelwa yithemba, ngoba lokhu kukhishwa okuzokusiza ukuba ubhekane nobunzima bokuphila obonakala bungenakulinganiswa nendawo yokubuka.
Owesifazane ukubona enye insikazi esembatho esifanayo isibonakaliso esixwayisa ukuthi empilweni yakhe isithandani esinamandla sizovela. Futhi uma ephusheni umngane wakho, ongakaze ucabange ukuthi ufanelwe umncintiswano, ucabange, kufanele umbheke ngokucophelela. Kungenzeka ukuthi udideka ukuzethemba ngokuzethemba ngokuziqhenya okulula.
Encwadini yephupho likaMiller kuthiwa ingubo ebomvu ephusheni - ukuthuthukisa isimo sokuphila. Ngokushesha uzokwazi ukunqoba isithiyo, esasilwa isikhathi eside. Konke okudingayo akuphuthelwa ithuba lakho futhi usebenzise lesi simo ngesikhathi ukuze kuzuze.
Ukuzibona ngengubo ebomvu
Iphupho lapho umuntu ezama khona ingubo yalo mbala ngokuvamile ibonakala ngabantu abathanda kakhulu abajwayele ukufeza okufunayo. Kubo, umbono wabanye ubaluleke kakhulu. Kodwa ngokushesha kuyasiza ukuxwayisa lowo mphupho: ungalindeli ukuthi amaphupho akho azogcwaliseka kule minithi. Ukuze uzifinyelele, usadingeka ukuba uhambe ngendlela enzima kakhulu, kodwa ekugcineni uzovuzwa ngemisebenzi yakho.
Ukubona ukuthi ugqoke ngengubo emifushane ebomvu uthi unengqondo ngokwazi ukujabulela ukuphila, njalo ukuletha izikhathi zenjabulo kuhlelo oluyimpunga, futhi uguqule noma yimiphi imisebenzi yomsebenzi esenzweni sezintandokazi. Kodwa isici esicacile sengqondo sephupho elinjalo asipheli lapho. Umphuzi udinga ukulungele ukuthi omunye wabangane bakhe uzomlungiselela ukumangala okumnandi.
Ukugqoka imbobo ebomvu ephusheni kusho ukuthi uzohamba ngokuzimisela futhi ngenjongo ekufezeni umgomo wakho. Lesi isibonakaliso esihle, esibonisa ukuthi uzothola ngokuqinisekile lokho okufunayo, kodwa ngenxa yalokhu kuzodingeka wenze isinqumo esingajwayelekile.
Umgqoko womshado wombala obomvu ngeke ulethe noma yini enhle kumuntu ophuphayo. Zonke izifiso zakhe ziyobhujiswa, futhi ithemba lizokhohliswa. Abesifazane ngokuphambene nalokho, lo mbono uthembisa ukuphila okuthakazelisayo kakhulu okugcwele izidlo zothando. Futhi uma ekhethiwe, khona-ke umshado wokuqala ungakwenzeka, futhi uthanda uthando olulodwa kuphela. Ingubo ende yombala ogqamile uthi umuntu ulungele izenzo eziningi ezingcolile, ukuze athole umusa kwabanye. Futhi, ngenxa yobulungiswa, kufanele kuqashelwe ukuthi uzophumelela.
Kumele uqaphele ukuthi ukugqoka ingubo ebomvu empilweni yangempela - isenzo sinesibindi ngempela. Ngezingubo zombala ofanayo, akuzona zonke izintombi ezizozinquma, ngoba kugcizelela kuphela ubulili futhi akufanele neze labo abakhetha ukuhlala emthunzini. Kodwa amaphupho ebusuku aphinde adingeke azizwe njengomuntu ohluke ngokuphelele futhi anqume ngezinyathelo zobuqili.
Ukuchazwa kwamaphupho: umama uphupha ngani
Iseluleko esiwusizo ngokudla kwabesifazane abakhulelwe
Ukuhlolwa kwangaphambi kokubeletha: imiphumela yokuhlola
Imidlalo yemfundo yezingane yabantwana kusukela ngonyaka
Imboni yezemfashini yezinkanyezi ezithandwayo zebhizinisi
Inyama ngesitshalo seqanda
Ukupheka kwezifundo zesibili kusuka kumakhowe
Yiziphi izinto ezidingekayo esibhedlela sesisu somama nengane
Izimfihlo zobuhle bezihle zaseMpumalanga
Uyini umehluko phakathi kothando nokuthanda umlutha?
Shintsha inani lokudla okunomsoco ngenkathi upheka
Ikhalenda lokukhulelwa: amasonto angu-27